मन्दिरमा घन्टी बजाउनुको धार्मिक र वैज्ञानिक कारण यस्तो रहेछ ! थाहा पाई राखौं…. – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/मन्दिरमा घन्टी बजाउनुको धार्मिक र वैज्ञानिक कारण यस्तो रहेछ ! थाहा पाई राखौं….
मन्दिरमा घन्टी बजाउनुको धार्मिक र वैज्ञानिक कारण यस्तो रहेछ ! थाहा पाई राखौं….
हिन्दु धर्मलाई प्रत्येक मन्दिरको पहिचानको रुपमा लिने गरिन्छ । प्राचीन समयदेखि नै मन्दिरमा घन्टी बजाउने परम्परा छ । मन्दिरमा घन्टी किन राखिन्छ र बजाइन्छ भन्ने बारेमा सायद कसैले पनि गहिरिएर सोचेको छैन होला ।
वास्तवमा मन्दिरमा घन्टी जडान गर्नु र बजाउनुको धार्मिक कारणका साथसाथै वैज्ञानिक कारण पनि छ । देवीदेवताको आरती घन्टनाद विना पूरा हुँदैन । घन्टीको ध्वनिले मन, मस्तिष्क र शरीरलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ । मन्दिरमा आरती हुँदा घन्टीको आवाजले मानिसको मनमा भक्तिभाव जाग्छ ।
मन्दिरमा राखिएका सानाठूला घन्टीका आवाजले वातावरणलाई शुद्ध बनाउँछन् । घन्टीबाट निस्कने ध्वनि चमत्कारी हुन्छ । हावामा भएका सूक्ष्म कीटाणु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । मन्दिरमा लगातार घन्टी बजाउँदा निस्कने ध्वनिले हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुलाई नष्ट गरि दिन्छन् ।
घन्टीको आवाजले नकारात्मक ऊर्जाको असर बेकामे बनाइदिन्छ र सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । घन्टीको आवाजले एकाग्रता बढाउँछ, मन शान्त हुन्छ, चिन्तन गर्ने क्षमता बढ्छ, धार्मिक विचार जन्मिन्छ र बुद्धि विकास हुन्छ ।
अब पूर्ण रुपमा नेपालमै बनेको मोटरसाइकल चढ्न पाइने !
गुल्मीमा घरमाथिबाट खसेको ढुंगाले लागेर ४ जना घाइते
नायिका करिश्मा मानन्धर – आज जन्मदिन मनाउँदै